Degmooyin doonaya in mas’uuliyad qaran laga qaato haddii daadad soo fatahmaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Noobiyadda Röskär ee ku dhextaal harada Vänern. Foto: Jens Prytz P4 Skaraborg
Degmooyin doonaya in mas’uuliyad qaran laga qaato haddii daadad soo fatahmaan
La daabacay fredag 7 februari 2014 kl 14.01
Maamulada degmooyinka ku hareereysan harada Vänern ayaa dood ay ku qoreen bogga doodaha ee wargeyska Dagens Nyheter ka digey in haddii ay daadad ka soo fatahmaan haradaas ay noqon doonto mid dalkoo dhan qaali ku ah. Iyagoo cuskanaya baaritaan ay sameysey jaamacadda Karlstad ayey rajeynayaan arrintaani ay noqoto arrin heer qaran.
Dowladda dhexe ayaa looga fadhiyaa in ay xil weyn iska saarto sidii looga hortegi lahaa khasaare waaweyn oo la filayo in ay ka yimaadaan haddii harada Vänern soo fatahanto. Sidaasna waxaa maanta bogga doodaha ee wargeyska DN ku qoray maamulada degmooyinka ku hareersan haradaas.
Khatarta in fatahaad timaaddo ayaa la soo kordhaya isbeddelka la filayo in uu ku yimaado cimilada. Sidaas awgeed ayeyna tahay in la difaaco magaalooyinka iyo wershadaha ku ag yaal haradaas. Haddii kale waxay khasaarooyinka waaweyn oo ka yimaadaa noqon karaan kuwo dalka qiime ballaaran ugu kaca, ayey qoreen siyaasiintaan degmooyinku.
- Waxaan nahay 14 degmo oo qur ah, laakiin waxaa laga hadlayaa balaayiin kharash ah. Waa taas tan hadda welwelka weyn nagu haysaa. Sidaas awgeed waxaa dooneynnaa in arrintaan laga xaajoodo sidii mustaqbalka xal loogu heli lahaa. Maxaa la sameyn karaa si aysan taasi u dhicin? Sidaasna waxaa tiri Marie Dahlin (S) oo ah guddoomiye kuxigeenka golaga maamulka degmada Vänersborg.
Afar iyo tobankaan degmo ayaa hadda dowladda ka doonaya in ay xil iska saarto sidii tallaabooyin mideysan looga qaadan lahaa iyo in ay ku deeqdo aqoon iyo dhaqaale labadaba.